Dowladda Soomaaliya Oo Soo Saartay Warsaxaafadeed Ku Aadan Gulufka Ka Dhanka Ah Alshabaab – Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka & Dalxiiska
By Mohamed Ali Juhaa	 On Jul 24, 2018
Dowladda Federaalka Soomaaliya, waxay si xoog leh u cambaareynaysaa kooxda al-Shabab oo weerar fuleynimo ah ku qaaday sandhig ciidamadu ku lahaayeen deegaanka Baar-Sanguuni.
Ku simaha Wasiirka Warfaafinta, ahna Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Warfaafinta ee dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Aadan Isxaaq Cali, ayaa sheegay in maleeshiyada al-Shabab ay ku jabeen weerarka, oo loo adeegsaday 2 gaari oo qaraxyo laga soo buuxiyay iyo maleeshiyada oo weerar toos ah isku dayday in ay xerada ku qabsadaan.
“Guul darro xoog leh ayay kala kulmeen ciidamada dalka, iyadoo ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa dowlad Goboleedka Jubbaland, oo iskaashanaya ay ku raad joogaan intii ka hartay maleeshiyada al-Shabaab ee weerarka soo qaadday, mana laga hari doono ilaa la carib-tiro.” Ayuu yiri Mudane Aadan Isxaaq Cali.
Ku simaha Wasiirka Warfaafinta dowladda Federaalka Soomaaliya, Mudane Aadan Isxaaq Cali, ayaa sheegay in Ciidanka Xoogga dalka, oo ka feejignaa dhagarta Al-shabaab ay halkaasi ku dileen ilaa 87 ka tirsanaa maleeshiyaadkii weerarka naf la caariga ah soo qaaday.
Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland, ayaa ku guuleystay, iyagoo daba socday haraaga maleeshiyada al-Shabab in ay si buuxda ula wareegeen buundada caanka ah ee Araare.
Ku simaha Wasiirka Warfaafinta, ayaa u mahadceliyay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland sida geesinimada leh ee ay u jabiyeen maleeshiyada habowsan ee al-Shabab ee caadeystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan.
Maleeshiyada al-Shabab, ayaa ciidamada qaranka kala kulmay guul darrooyin isdaba joog ah muddooyinkii ugu dambeeyay. Ciidamadu ma harsan doonaan ilaa ay ka soo afjaraan hagar-daamada maleeshiyada al-Shabab iyo gabood-fallada ay kula kacaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan. Jiritaanka al-Shabab waa gabaabsi.
Dowladda Soomaaliya Oo Soo Saartay Warsaxaafadeed Ku Aadan Gulufka Ka Dhanka Ah AlshabaabMaxamed Cali Juxaa
Gabadhii Soomaaliyeed Ee Ugu Horreysay Oo Loo Xiray Darajada Sarreeye Guuto